Ajụjụ - TC Manufacturer
Mgbanwe ihu oled siri ike maka iPhone XS MAX
Incell lcd nnọchi nke iPhone 11
Incell lcd nnọchi maka iPhone 11 pro
Incell lcd nnọchi nke iPhone 11 Pro Max
Incell lcd nnọchi maka iPhone XR
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 6G
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 6P
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 6S
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 6SP
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 7G
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 7P
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 8G
LCD ihuenyo nnọchi maka iPhone 8P
Ahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
You nwere ntakịrị opekempe iji?
Ee, anyị chọrọ iwu mba niile ka nwee ọnụọgụ opekata mpe na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ị resell ma ọ dịkarịsịrị ntakịrị, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Can nwere ike ịnye akwụkwọ dị mkpa?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo Nnyocha / Nrụpụta; Inshọransị; Mmalite, yana akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ ebe achọrọ.
Kedu oge oge onye ndu?
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị nwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime ya.
Kedu ụdị ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
You nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị, Western Union ma ọ bụ PayPal:
Nkwụnye ego 30% n'ihu, 70% itule megidere B / L.
Kedu akwụkwọ ikike ngwaahịa a?
Anyị na-akwado akwụkwọ maka ọrụ na ọrụ aka anyị. Anyị nkwa anyị ka afọ ojuju nke ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Anyị na-ejikwa mbukota ihe egwu pụrụ iche maka ngwongwo ndị dị ize ndụ na ndị na-ebu mmiri nchekwa oyi nwere nkwado maka ihe ndị na-emetụta okpomọkụ. Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na igwe anaghị eburu ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Kedu maka ụgwọ mbufe?
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Express bụ ejikarị ndị kasị quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa ego, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.
ANTchọrọ ka anyị rụọ ọrụ?
Onye na emeputa TC
Ngwaahịa dị ọkụ, Sitemap, AMP Ekwentị